Asabotsy 5B Karemy (Jo.11,45-57) 27/03/2021 | FKMP
Asabotsy 5B Karemy (Jo.11,45-57) 27/03/2021
« Ary maro tamin’ny Jody izay tonga tao amin’i Maria sy Marta sy nahita ny nataon’i Jesoa no nino azy. Fa ny sasany tamin’izy ireo kosa dia lasa nankany amin’ny Farisiana, ka nilaza taminy izay nataon’i Jesoa.
Dia namory ny mpanolo-tsaina ny lehiben’ny mpisorona sy ny Farisiana ka nanao hoe: Inona ity ataontsika, fa manao fahagagana maro iny Lehilahy iny? Raha avelantsika hanao ihany izy, dia hino azy ny olona rehetra, ka ho avy ny Romana dia haka ny tanànantsika sy ny firenentsika. Dia hoy ny anankiray tamin’izy ireo atao hoe Kaifa, izay lehiben’ny mpisorona tamin’izany taona izany: Tsy mahalala na inona na inona hianareo, na tsy mihevitra akory fa tsara ho anareo raha maty ho an’ny vahoaka ny lehilahy anankiray, mba tsy ho rava ny firenena manontolo. Tsy avy aminy anefa no nitenenany an’izany, fa noho izy lehiben’ny mpisorona tamin’izay taona izay, dia naminany izy fa ho faty ho an’ny firenena Jesoa, ary tsy ho an’ny firenena ihany, fa mba hamory ny zanak’Andriamanitra izay efa niely koa ho antokony iray. Hatramin’izany andro izany dia nikendry izay hahafaty azy izy ireo.
Koa tsy nandeha am-pahibemaso tany amin’ny Jody intsony Jesoa, fa niala teo nankany amin’ny tany akaikin’ny efitra, ho any an-tanàna atao hoe Efrema, dia nitoetra tany izy mbamin’ny mpianany.
Efa akaiky ny Pakan’ny Jody tamin’izay ka maro ny olona avy tamin’izany tany izany no niakatra tany Jerosalema alohan’ny Paka, mba handio tena. Dia nitady an’i Jesoa izy ireo ka nifampilaza tao anatin’ny tempoly hoe: Ahoana no hevitrareo, dia tsy ho avy hamonjy ny fety ve izy? Ny lehiben’ny mpisorona sy ny Farisiana tamin’izany efa nandidy fa izay mahita ny itoerany dia tsy maintsy milaza, mba hisamborana azy. »
Maty Ianao ry Jesoa : Ilay tsy manan-keloka, r’ilay tsy manan-tsiny.
Novonoina Ianao r’ilay be fitiavana, hisolo heloka ny tsirairay tsy ankanavaka.
Raiso re ny fifonanay na dia tsy mendrika aza.
Manjakà ao anatin’ny fonay lalina, hanova ny fo vatonay.
« Manatona, rey vahoaka, mihainoa ny teny to
Fa hiteny Andriamanitra, hampibebaka ny fo
Zao no andro fibebahana
Mibebaha rey vahoaka
Zao no andro fiovana
Miova ho olom-bao »
Previous Post: Zoma 5B Karemy (Jn 10, 31-42) 26/03/2021
Next Post: Alatsinainy Masina B (Jn 12, 1-11) 29/03/2021